भदौ ८ मा वास्तविकता चित्रित ‘हामी शरणार्थी’ | Screennepal
भदौ ८ मा वास्तविकता चित्रित ‘हामी शरणार्थी’
Jul 07, 2017screennepalMovie0
काठमाडौं, २३ असार । भुटानबाट लखेटिएर नेपालमा शरण लिएर बसेका शरणार्थीहरुको कथामा आधारित फिल्म ‘हामी शरणार्थी’ आगामी भदौ ८ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुने भएको छ ।
केरुङ् फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण गरिएको फिल्म तीज चाडलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । फिल्मका निर्देशक विजय लिम्बु केरुङले फिल्मले भुटानी शरणार्थीले पाएको दुःख र कष्टलाई प्रस्तुत गरेको बताए ।
फिल्ममा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले दुई सन्तानकी आमाको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन् । उनीसँगै जिवन भट्टराई, प्रतिमा रसाईली, नयन घिमिरे, विक्रम श्रेष्ठ, प्रमिला उप्रेती, बालदीप राई र दिलीप योङहाङलगायतको अभिनय छ ।
अर्जुनकुमार पोखरेल, प्रकाश भण्डारी र प्रकाश शिवाकोटीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको फिल्ममा कृष्णप्रसाद पोखरेल कार्यकारी निर्माता छन् । फिल्ममा हिमाल केसीको द्वन्द, उत्तमजंग लिम्बुको संगीत, कमल राईको नृत्य, बैजु सिंहको पटकथा र संवाद तथा सौरभ लामाको छायांकन छ । फिल्मको वितरक आरआर फिल्मस् हो ।
Previous Postनेपालमा मात्र होइन हलिउडमा पनि कपी गरिन्छ बलिउड फिल्म ! Next Postस्वीमिङ पुलमा भविष्यका एयर होस्टेजहरु ! (फोटोफिचर)
यसपटकको ‘भ्यालेनटाइन–डे’ अञ्जु पन्तसँग…!
कोहलपुरमा कला प्रशिक्षण
पुरनको ‘फेरि–फेरि’ बन्दै
screennepalJan 23, 2018
नेपाली गायन क्षेत्रकी ‘मेलोडी क्वीन’ अञ्जु पन्तको फ्यानका लागि खुसीको खबर छ किनकि, यसपटक अञ्जुसँगै प्रेम दिवश...
पवित्रालाई पाउन बुद्धि र गौरव बीच यस्तो हानथाप
Asish RanaJan 23, 2018
‘चेरिश्मा नाइट’मा काठमाडौ–पोखराका मोडलको कम्बिनेशन (फोटो फिचसहित)